ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Bimetallic ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် မှအရည်အသွေးမြင့် Bimetallic ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. , ထုတ်လုပ်သူဖို့ကြိုးစားကြကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး exporter ဖြစ်ပါသည် Bimetallic ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် နှင့်အာမခံချက်ကျွန်တော်၌အကြှနျုပျတို့၏ clients များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလိမ့်မည် Taiwan။ မည်သည့်ပြိုင်ဘက်ကျွန်တော်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါအရည်အသွေးသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးသင်သည်မည်သည့်ဘတ်ဂျက်အဘိုးပွိုင့်ကောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကနေစုံစမ်းရေးကြိုဆိုပါတယ်စီနှင့်အခြားများအတွက်န့်အသတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပါ။
ပုံစံ - All STAINLESS STEEL No. SB73、SB73F
DSC အားလုံးသံမဏိ BIMETALLIC Steam ထောင်ချောက်
●MOP 32K x ကို 320̊ဂ.
●လေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့် CO2 ကိုလေမထုတ်ပါနှင့်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/bimetallic-steam-trap-1.html
အကောင်းဆုံး Bimetallic ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Bimetallic ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Bimetallic ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
DSC သံမဏိ BIMETALLIC Steam ထောင်ချောက်များမဟုတ်ဘူး.SB81、SB81F ●သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 40K 350 x ကို̊ဂ. ●Excellent ကချေးခံနိုင်ရည်. ●ဟိုက်ဒရောလ်ရှော့ခ်များကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●လေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့် CO2 ကိုလေမထုတ်ပါနှင့်. ●နောက်ပြန်ဖိအားဆန့်ကျင်ကောငျးမှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည် ●CONDENSATE ၏ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●အသေးစားနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား ●အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုအစားထိုးကြသည် ●ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များအရထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်:ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလက်မှတ်,စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာ,မူလနှင့် WPS ၏လက်မှတ်/PQR.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.SB81